लालबाबुको लकिर !
लालबाबु सरकारको मन्त्री हुँदाको लोकप्रियता भन्दा चुनाव जित्नुका कारणले अर्थपूर्ण सावित भए
विराटनगर, २३ मंसिर । चुनाव प्रचारका समयमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफ्ना स्पर्धीका बारेमा हलुका टिप्पणी गरेका थिए, ‘को हो लालबाबु ? म चिन्दिनँ ।’ उनको यो भनाईसँग प्रतिस्पर्धी त आक्रोशित थिए नै कांग्रेसका मतदाता पनि खुशी थिएनन् ।
लालबाबु पण्डित वामपन्थी गठबन्धनका प्रतिस्पर्धी थिए जसले उक्त क्षेत्रमा कोइरालाको अहंकारी टिप्पणीको प्रत्युत्तरमा कोइरालालाई पराजयको स्वाद चखाए । सायद, कोइरालाले अब लालबाबु र आफूबीचको परिचयको अन्तर ६ सय ७५ मत अन्तरमा पाउन सक्छन् होला ।
आखिर आफ्नो पकड भएको क्षेत्रमा किन शेखर चिप्लन बाध्य हुनुपरेको हो ? ‘शेखर राम्रा मान्छे हुन् । तर, अहंकार दम्भले उनलाई पोल्यो । जनतालाई उनले कहिले पनि हात जोडेनन् । बृद्धबृद्धा र आफूभन्दा अग्रजको सम्मान गरेनन् । यसको परिणति भोगेका हुन्’, सर्वसाधारण कपिल रायमाझी भन्छन्, ‘हामी शेखरलाई राम्रो नेता मान्थ्यौं तर, उनी राम्रो व्यवहार गर्ने मान्छे पाएनौं ।’
देशभर वामपन्थीले पाएको मतका आधारमा लालबाबुले शेखरलाई ठूलै मतान्तरले हराउनुपर्ने थियो । तर, क्षेत्रका आधारमा शेखरको अत्यधिक समर्थक र मतदाता भएको क्षेत्र हो । तर, शेखरलाई आफ्नै व्यहोराले पराजित गरेका केही बुज्रुक कांग्रेस बताउँछन् ।
कांग्रेसका पुराना मतदाता विराटनगरका दुर्गाप्रसाद दहाल भन्छन्, ‘हामी गिरीजाबाबुसँग संगत गरेका मान्छे । मत माग्न आउँदा वा भेट्दा पनि शेखर हात जोड्न जान्दैन थिए । उनको यो शैली प्रवृत्तिले मन कुँडिनु स्वभाविक भयो । तर, लालबाबु जति साधगी जीवनमा बाँचेका थिए, मत माग्न आउँदा पनि उनले सोही प्रकारको सादा शैली देखाए । मानिस दम्भ र अभिमानले कहाँ विजेता हुन्छ र ? इमान र साधगीले पो बिजेता हुन्छ । लालबाबु त्यसैका प्रतिक बनेर निस्किए ।’
चुनाव हार्नासाथ देशले इमान हार्दैन भन्ने उदाहरणका रूपमा लालबाबुको उदय भएको सर्वसाधारण बताउँछन् । तर, लालबाबुको लकिर (भाग्य) कमजोर छँदै थिएन । उनले भाग्यले दिएको मौकालाई जनताको हितमा प्रयोग गरेका कारणले नै कांग्रेसका उत्तराधिकारी कोइरालालाई पछार्न सफल भएको धेरैको मान्यता छ ।
संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा पराजय भोगेर पनि सिंहदरबारको कुर्सीमा मौका पाएका लालबाबुले राजनीतिक नेतृत्वले गैरभ्रष्ट भएर काम गर्न सक्ने उदाहरण दिए । यतिसम्मकी कर्मचारीले खाजाका नाममा उनकै मन्त्रालयमा गरेका बेतुकका खर्चमा नियन्त्रण गर्दा मन्त्रालय महिनामा १ लाख खाजा खर्चवापत जोगाउन सफल भयो ।
कर्मचारीले चाहेको ठाउँमा सरूवाभन्दा पनि योग्यता र क्षमताका आधारमा निर्णय गरे । नेपाल छाडी ग्रिनकार्ड र पिआर लिएर सुविधामा बाँच्ने कर्मचारी र नागरिकसम्मलाई उनले विदेशीको संज्ञा दिए र कानुन ल्याए । उनका यहि कामका कारणले लोकप्रियता बलियो भएको थियो ।
‘भ्रष्टाचारको बिऊ उखेल्न गरेको भूमिका आधारमा नै लालबाबुले जितेका हुन् । कांग्रेसको दम्भ अन्त्य हुनु थियो भई छाड्यो । माओवादी पहिलो हुँदा उसको दम्भले सकिएको थियो, तेस्रो भयो, कांग्रेस पहिलो हुँदा उसको दम्भले सक्यो अब एमाले पहिलो बनाउने जनताको निर्णय सबैका लागि परीक्षण काल पनि हो’, दाहाल थप्छन्, ‘यसै परीक्षाको निरन्तरता हो, लालबाबुलाई जिताएर शेखर हराउनु । अब काम हेर्ने हो ।’